Barnaamijyada Gacanta - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Adeegga Horumarinta Codsiga Mobile -ka
mobile horumarinta app waa hab dhisid codsiyada mobile oo ku shaqeeya aaladaha gacanta. Codsiyadaan midkood waa la sii rakibi karaa ama waa la soo dejisan karaa oo rakibi karaa adeegsadaha goor dambe. Waxay adeegsadaan awoodaha shabakadda ee aaladda si ay uga shaqeeyaan ilaha xisaabinta meel fog. Sidaa darteed, a mobile horumarinta app geedi socodku wuxuu u baahan yahay abuurista software kaas oo lagu rakibi karo aaladda, oo u sahlaysa adeegyada dhabarka dambe ee helitaanka xogta API-yada, iyo tijaabinta arjiga aaladaha la beegsanayo. apps mobile, sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso cabbirka shaashadda, shuruudaha qalabka, iyo dhinacyo kale oo badan oo ka mid ah horumarinta app geedi socodka.
Horumarinta Barnaamijyada Mobile -ka
Labada app ee ugu muhiimsan mobilada dhufto ee waa iOS ka Apple Inc. iyo Android ka Google. IOS waa nidaamka hawlgelinta mobilada ee gaarka ah ee Apple loo dhisay gaar ahaan iPhones. Android, si kastaba ha ahaatee, waxay ku shaqeeyaan aaladaha mobilada ee ay soo saaraan OEM-yada kala duwan, oo ay ku jiraan Google. Iyadoo ay jiraan waxyaabo badan oo ay iskaga mid yihiin labadooda, si kastaba ha ahaatee way kala duwan yihiin software xirmooyinka horumarinta (SDKs) waxaa loo isticmaalaa noocyo kala duwan dhufto ee. Apple waxay u isticmaashaa iOS si gaar ah qalabkooda, halka Google uu sameeyay Android diyaar u ah shirkadaha kale ee buuxiya shuruudaha gaarka ah. Horumarinta waxay dhiseen in ka badan 1.5 milyan codsiyo labadaba dhufto ee ilaa taariikhda.
Waad u dhowaan kartaa mobile horumarinta app afar siyaabood oo kala duwan:
Dhiso Dhalad Codsiyada Macaamiisha
Dhiso Dhalad-Madal-Wadareed Codsiyada Macaamiisha
Dhiso Isku -darka Codsiyada Macaamiisha
Dhis Codsiyada Shabakadda Horumarineed